Diyopost.com :: आश्चर्य बन्दै विश्वकपका खेलहरु : आशलाग्दा देशबाट निराशाजनक प्रदर्शन ! आश्चर्य बन्दै विश्वकपका खेलहरु : आशलाग्दा देशबाट निराशाजनक प्रदर्शन ! - Diyopost.com
आश्चर्य बन्दै विश्वकपका खेलहरु : आशलाग्दा देशबाट निराशाजनक प्रदर्शन !
काठमाडौँ । विश्वकप २०१८ शुरु हुनु एक महिना अगावै सामाजिक संजालका भित्ताहरु राम्रैसंग रंगिएका थिए । बजारमा विभिन्न देशहरुका जर्सीहरु धमाधम बिक्रि हुँदै थिए । टोलटोलमा चिया गफमा विभिन्न देशको खेल र आउदो विश्वकपको विषयमा चर्का वहस पनि राम्रैसंग भयो । फुटबलका कट्टर फ्यानहरु आफ्नो आफ्नो सपोर्टका देशहरुको बारेमा तारिफ र विपक्षी देशहरुको बारेमा चर्का आलोचना गर्न पनि भ्याए । विश्वकपको पहिलो खेल आफ्नै होम ग्राउण्डमा भएको कारणले पनि रसियाले सानदार जित हात पार्न सफल भयो ।
विश्वकपमा सामान्यतया ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल लगायतका देशहरुलाई सपोर्ट गर्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । त्यसो त जुन टिम शक्तिशाली हुन्छ र जुन टिमले विगतका खेलहरुमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ त्यसैको पछाडी नै धेरै फ्यानहरु लाग्दछन । विश्वका चर्चित खेलाडीहरु लियोनल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेयमार लगायतका खेलाडीहरुलाई लिएर पनि देशको पक्ष लिएको देखिन्छ । सन २०१४ को विश्वकप विजेता जर्मनीले यसपाली पनि विश्वकप जित्नेमा धेरैको आशा थियो । त्यहि साल फाईनलमा जर्मनी संग १–० ले पराजय भोग्न परेको र त्यसको बदला २०१८ को विश्वकपमा लिने तयारी अर्जेन्टिनाको थियो । ०१४ कै विश्वकपमा जर्मनी संग ७–१ को लज्जास्पद हार व्यहोरेको ब्राजिल यसपाली फर्ममा रहेको थियो । यिनै विषयहरुमा आधारित रहेरै अहिलेको विश्वकप थप रौनक र चाखलाग्दो हुन्छ भन्ने सबैको मान्यता रहेको थियो ।
चर्चित फुटबलर तथा अर्जेन्टिनाका स्ट्राईकर तथा टिम क्यापटेन लियोनल मेस्सी सबैको आकर्षकका केन्द्रविन्दु बनेका थिए । पछिल्लो विश्वकपको हार फिर्ता गर्ने सुनौलो अवसर अर्जेन्टिनाको लागी थियो । समुह चरणको खेलमा विश्वकप डेब्यु गरेको आईसल्याण्ड संग पहिलो खेल हुने हुँदा सबैले सहज रुपमा लिँदै सजिलै जित्नेमा ढुक्क थियो । सबैको आँकलन थियो, अवश्य पाँच गोलसम्म हान्न सक्छ तर ठिक उल्टो भईदियो । यसबाट अर्जेन्टिना र मेस्सीका फ्यानहरुमा केहि खिन्नता उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै थियो । तैपनि खेल १–१ को बराबरिमा सकिएको कारण आत्तिहाल्नु पर्ने कारण खासै थिएन तर मेस्सीको पेनाल्टि मिस हुनुले विश्वमा चर्चा पायो ।
अर्कौ अकल्पनिय नतिजा जर्मनी र मेक्सिको बिचको खेलले देखायो । आईतबार राति भएको खेलमा जर्मनी मेक्सिको संग १–० ले पराजित बन्न पुग्यो । शुरुवाती चरणदेखी नै आक्रमक खेल खेलेको मेक्सिकोले खेलको ३५ औँ मिनेटमा गोल गरेको थियो । लगत्तै खेलको ३८, ६४ र ८९ औँ मिनेटमा जर्मनीले पाएको राम्रो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु हारको कारण बन्न पुग्यो । २०१४ मा चम्किएको जर्मनीले ०१८ को विश्वकपको शुरुवाती खेलनै खराव प्रदर्शन गरेपछि बजारमा जर्मनीको खेल विषयलाई लिएर खराब टिकाटिप्पणीहरु हुन थालेका छन ।
आईतबार राति नै भएको अको खेल भएको थियो । सर्वाधिक विश्वकप बिजेता ब्राजिल र अहिलेसम्म ३ पटक मात्र सेमिफाईनल पुगेको स्विटजरल्याण्ड बिच भएको खेलको नतिजा पनि तमाम ब्राजिलियन सपोर्टहरुका लागी चित्तबुझ्दो देखिएन । सन २०१४ मा व्यहोर्नुपरेको लज्जास्पद हारको बदला यसपटकको विश्वकपको उपाधी चुमेर लिने दाउमा रहेको ब्राजिलले शुरुवाती खेल नै निराशाजनक खेलेपछि यसपटकको विश्वकपको यात्रा कठिनपुर्ण हुने देखिन्छ । ब्राजिलका स्टार खेलाडी नेयमारले सोचेजस्तो उत्कृठ खेल देखाउन नसक्नु , पटकपटक पाएको अवसरलाई गोलमा परिणत गर्न नसक्नु , खेलाडीहरु बिच उचित समन्वय हुन नसक्नु आदी ईत्यादी कुराहरुले गर्दा आईतबार रातिको खेलमा ब्राजिल १–१ मा रोकिएको थियो ।
अब के हुन्छ त्यसको लागी आगामी खेलहरु बाट थाहा हुनेछ । तथापी शुरुवाती चरणकै खेलहरु निराशाजनक खेलेपछि विश्वकपका दाबेदार देशहरु पछाडी पर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । शुक्रबार राति भएको खेललाई आधार मान्ने हो भने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा रहेको पोर्चुगल र स्पेनको खेल आकर्षक रहेको थियो । विश्व फुटबल बजारमा रोनाल्डो र मेस्सीका फ्यानहरु एक अर्कालाई दुष्मनका रुपमा लिन्छन । पहिलो खेलमै रोनाल्डोले ह्याट्रिक मार्फत आफ्नो परिचय दिएका छन भने मेस्सीको पेनाल्टी मिस हुन अभिशापको रुपमा देखिएको छ ।